Maamulka Oromadda Oo Wanjalaad iyo Jees-jees ugaga jawaabay gumaadkii ay Soomaalidda u Geysteen. – Xeernews24
Maamulka Oromadda Oo Wanjalaad iyo Jees-jees ugaga jawaabay gumaadkii ay Soomaalidda u Geysteen.
Waxaa warar is khilaafsan ay ka soo baxayaan isku dhacyo dalka Itoobiya ku dhexmaray Soomaalidda iyo Oramadda.
Afhayeen u hadlay gobolka Oramiya oo lagu magacabo Addisu Arega Kitessa ayaa sheegay in rabshadahani ugu dambeeyay ay ka dhasheen weeraro aargoosi ah oo ay dadka Oramadda ku qaadeen degmo ku taalla badhtamaha gobolka Oramiya halkaasi oo 32 oo qof oo Soomaali ah lagu laayeey.
Waxuu intaa ku daray in 29 qof oo Oramo ah ay dileen dad Soomaali gobolka Hawi Gudina iyo dagmada Daro Lebu,taasi oo uu sheegay in ay ka dhalatay in Oramada ay qaadaan weeraro aargoosi ah.
Wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa afhayeenkan maamulka Oramiya ayaa sheegay in dowladda degaanka Oramiya ay ka shaqaynayaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii ka dambeeyay dilalka dhacay.
Dawlad-deegaanka Soomaalidda Itoobiya ayaa dhankaooda ku eedeyay ismaamulka Oromiya dhimashada ugu yaraan 60 qof oo ay sheegeen in ay ahaayeen dad maxaabiis ah.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xaqiijiyay in guddi loo saaray arrinta si ay u soo baadhaan ka dibna wuxuu sheegay in waxa sharciga uu ka qabo lagu qaadi doono kuwa dembiga uu ku caddaado.
Isku dhacyadani u dhaxeeya Soomaalidda iyo Oramadda ayaa laga cabsi qabaa in ay wax u dhinto ammaanka guud ee dalka Itoobiya.
Itoobiya ayaa ah wadanka ugu wayn dhanka dhaqaalaha gobolka waxa ayna Itoobiya xidhiidh dhaw la leedahay wadamada reer galbeedka oo mar walba is garab taagi jiray ilaalinta iyo adkayntay jiritaanka Itoobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/0000alme1.jpg 296 590 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-19 11:20:022017-12-19 11:20:26Maamulka Oromadda Oo Wanjalaad iyo Jees-jees ugaga jawaabay gumaadkii ay Soomaalidda u Geysteen.
Maxay ka-wada Hadleen Madaxweyne Muuse Biixi, Ugaaska Mustafe iyo Gendaha Beel-weynta... Dawladda Qadar oo muruqyo kuus-kuusan tusday Sacuudiga iyo Xulafadiisa.